अष्ट्रेलियामा आगलागीबाट बचेका जनावरलाई हेलिकोप्टर मार्फत खाधान्न फालिदै - Experience Best News from Nepal
प्रकाशित मिति : सोम, पुस २८, २०७६
अङ्ग्रेजी वेबसाइट डेली मेलकीको रिपोर्ट अनुसार आगलागीमा एक अर्व भन्दा बढी जनावरहरू मरेको दाबी गरेको छ । आगोबाट जोगिएका जनावरहरू भोजनको अनुपलब्धताको कारण मर्नु हुँदैन, किनकि तिनीहरूको खानाको स्रोतहरू पनि आगोको कारण समाप्त भएको छ। जनावरहरूको ज्यान जोगाउन अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स सरकारले आकाशबाट खाना झार्दै पशुहरूलाई बचाउने जिम्मेवारी लिएको छ। यस उद्देश्यका लागि सरकारले निरन्तर गाजर र शखरखण्ड हेलिकप्टरहरूलाई जङ्गलमा फ्याँकदैछ।
नेशनल पार्क सेवाले हालसम्म २,२०० केजी तरकारीहरू जनावरहरूको लागि जङ्गलमा खसालिएको छ। नयाँ दक्षिण स्वयम् पर्यावरण मन्त्री म्याट केनले डेली मेल भने, यद्यपि यी जनावरहरूले आफ्नो ज्यान जोगाए पनि उनीहरूसँग खाद्यान्नको स्रोत छैन। उनले भने, यी वाल्याबिजहरू आगोबाट जोगिए तर अब उनीहरूसँग खानेकुरा केही छैन । किनभने खानाका सबै स्रोतहरू आगोको कारण समाप्त भएका छन्।वाल्याबिजहरू पहिलेदेखि नै धेरै चिन्तित छन् किनकि अहिले यहाँ खडेरीको अवस्था खडा भएको छ र यो परिस्थितिमा उनीहरूका लागि बाँच्नु ठुलो चुनौती हो उनले भनेका छन् ।
अस्ट्रेलियामा जनावर वक्ता लिन ह्वाइटले भने, उनीहरूले आगोले छोडेका सबै जनावरहरूको जीवनलाई पुनः स्थापित गर्न यथाशक्य गरिरहे छन् । उनले भने, आगलागी पछि केही हप्ताहरूका लागि धेरै बाटोहरू बन्द भएको मार्गका कारण खानेकुरा नहुँदा पशुहरूको मृत्यु हुने जोखिम बढेको छ। यो अझै पनि दुखी हुनेछ यदि हामी अझै पनि जनावरहरूको जीवन बचाउन सक्दैनौँ।
पाकिस्तानी पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफलाई देशद्रो’ह अभियोगमा दिईएको मृ’त्युद’ण्ड रद्द !
इरानले गर्यो फेरी अमेरिकी सैनिक क्याम्पमाथि फेरि मि’सा’इल आ’क्र’मण
अमेरिका र इरानको तनाव भैरहेको बेला, चिन र अमेरिकाको यस्तो टकराव !
युक्रेनले ईरानसँग माग्यो विमान खसालेको क्षतिपूर्ति
अर्का इरानी सैन्य कमाण्डर मा’र्ने अमेरिकी योजना विफल !
आस्था राउतको सुरक्षा जाँच गर्ने प्रहरी जवानले दिइन् उजुरी ? यस्तो हुन सक्छ सजाय